काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुमा सेनाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्नेहरुको नाम सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त हेलिकोप्टरमा भारतको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) विपिन रावतका साथै उनकी पत्नीसहि त १४ जना सवार थिए ।
दुर्घटनामा चार जनाको शव बरामद भएको छ । ७ जना घाइते भएका छन् । भारतको वायुसेनाले यो दुर्घटनाको जाँचको लागि निर्देशन दिएको छ । खराब मौसका कारण दुर्घटना भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
रावतसँगै उनी पत्नी मधुलिका रावत, उनका डिफेन्स स्टाफ, जसमा ब्रिगेडिएर एसएल लिड्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल सँगै थिए । यस्तै, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हरिजिन्दर सिंह, पीएसओ एनके गुरसेवक सिंह, एनके जितेन्द्र कुमार, एलएनके विवेक कुमार, एलएनके बी साई तेजा, हवलदार सतपाल सहभागी थिए ।
सार्वजनिक सुचि अनुसार हेलिकोप्टरमा रावतका परिवारका अन्य सदस्य पनि थिए ।
खाँदबारी । सङ्खुवासभाको उत्तरी क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिका–२ लिङ्गमबाट हेलिकोप्टरमार्फत सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ । सुत्केरी हुन नसकेपछि भोटखोला–२ लिङ्गमकी २८ वर्षीया चिप्पयाङ्जम भोटेको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि
तेह्रथुममा हेलिकोप्टर चार्टर गरी विवाह !
तेह्रथुम । गाउँमा विवाह हुँदा बस, ट्याक्सी तथा साना गाडी रिजर्भ गर्नु सामान्य नै बन्न थालेको छ । तर, सामान्य नागरिकले हेलिकोप्टर चार्टर गरेर विवाह गरेको सायद कमै मात्र सुन्न
ताप्लेजुङमा हिउँमा फसेका बाबुछोरा नभेटेपछि रित्तै फर्कियो हेलिकोप्टर
ताप्लेजुङ । गोठ सार्ने क्रममा हिमपात भएर हिउँमा फसेका ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका-५ पापुङ सिम्बुकका बाबुछोराको उद्धारका लागि गएको हेलिकोप्टर रिक्तै फर्किएको छ । अल्टिच्युट एयरको हेलिकोप्टर पापुङको गाउँमा बसेर दुई पटक
गोठ सार्दासार्दै हिउँमा फसे बाबुछोरा, हेलिकोप्टर पठाईदै !
ताप्लेजुङ । गोठ सार्ने क्रममा हिमपात भएर हिउँमा फसेका ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका-५ पापुङ सिम्बुकका बाबुछोराको उद्धारका लागि हेलिकोप्टरबाहेक अर्को बिकल्प नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । ओडारमा बसेका बाबुछोरा शुक्रबार साँझसम्म 'हिउँको